Jadwalka doorashadda Farmaajo oo fashil ku yimid | KEYDMEDIA ONLINE
Jadwalka doorashadda Farmaajo oo fashil ku yimid
Maanta ayaa waxaa la filayaa inay billaabato diiwaangelinta Musharixiinta Kuraasta Aqalka Sare, iyadoo doorashadduna la qorsheeyay inay billaabato 31-ka bishaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa mar labaad fashil ku yimid jadwalka Farmaajo u dejiyay doorashadda Soomaaliya kadib markii ay Musharixiinta Mucaaradka iyo qaar kamid ah Maamul Goboleedyada ay kasoo horjesteen gudiyadda aan dhex-dhexaadka ahayn inay maamulaan hanaanka codbixinta.
Jadwalkii hore wuxuu ahaa November 2020, laakiin ma qabsoomin, waxaa markale la sameeyay jadwalka cusub oo dhawaan gudiga doorashadda ku dhawaaqay kaasoo lagu sheegay in 26-ka bishan ay billaabato diiwaangelinta Musharixiinta kuraasta Aqalka Sare.
Cabaqadaha ugu waaweyn ee doorashadda hortaagan waxaa kamid ah khilaafka magacaabista gudiyadda iyo Ciidanka DF ee la geeyay Gedo, oo Mucaaradka ay ku baaqayaan in laga soo saaro, islamarkaana la kala diro gudiyadda aan dhex dhexaadka ahayn.
Mar hadii maanta aysan billaaban diiwaangelinta musharixiinta doorashadda Aqalka Sare, waxaan dhici doonin soo xulista ergada iyo qabashadda doorashadda Baarlamaanka, maadaama aan wali xal laga gaarin muranka taagan.
Gudiyadda lagu muransan yahay ayaa u badan dhalinyaro dowladda u shaqeeya, kuwa NISA katirsan iyo kuwa kale oo Farmaajo baraha bulshadda ka taageeri jiray, waxuuna Madaxweynaha doonayaa inay usoo saaraan Xildhibaanno isaga u codeeya Feb 8, 2021.